Development mere eme - Xizi Igwe Mbuli Co., Ltd
Were n'Ọrụ nkekọrịta
Vetikal njem eruba
Kwụ njem eruba
XIZI eburu n'ihu quintessence nke mbuli development echiche nke a na narị afọ, inherits ahụmahụ na teknụzụ nke mbuli ụlọ ọrụ karịrị afọ 30, ruo na adigide ọhụrụ na mgbe na-ekwusi a raara onwe ya nye, pụrụ iche na concentrative àgwà azụmahịa mmepe.
N'ime afọ, oge ọ bụla nke ji ezi obi na okwukwe aka na ahịa, oge ọ bụla nke imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa .... ndị niile na-agba akaebe nke XIZI si tupu. Ọ bụ kpomkwem n'ihi na ịmụmụ ezi ọnụ ọchị nke oge ọ bụla, XIZI emewo ngwa ngwa ghọtara na iche na nke na-abata na mba ogbo si anụ ụlọ ahịa.
Ịchịkọta agadi talent na enterprise ọrụ na management, ọkachamara mbụ ọnụego ike ahịa talent, dị ike ngwaahịa nnyocha na mmepe talent nakwa dị ka ahụmahụ technology na-ewu ụlọ talent, XIZI otu bụ obi ike nke na-ewetara pụrụ ịtụkwasị obi ọnụ ọchị na n'ụwa nile.
Na 2016, ihe ịga nke ọma ulo oru dị iche iche ọhụrụ ngwaahịa, gụnyere diski ụdị àjà ihe ọṅụṅụ mkpa moto na Victor MRL (T) mbuli na igwe ụlọ, XEC-6000 akara-drive ike mma escalator.
Na 2015, XIZI Industrial Park shined na ụlọ ọrụ, ọdịda aha n'elu-100 enterprise na Zhejiang Province.
Na 1997, XIZI OTIS mbuli Co., Ltd. e eze tọrọ ntọala.
Na 1996, "XIZI" maliri na Nke 1 mba ika na anụ ụlọ ahịa.
N'afọ 1993, XIZI exported ya mbụ mbuli na Vietnam.
Na 1981, XIZI Igwe Mbuli e eze tọrọ ntọala.
Copyright © 2017 XIZI Igwe Mbuli